Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Puntland oo Howlo shaqo ku tagey gobolka Haylaan(Sawirro) – Wasaaradda Maaliyadda
Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Puntland oo Howlo shaqo ku tagey gobolka Haylaan(Sawirro)
February 9, 2022	in Warka
HAYLAAN – Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Dowladda Puntland Mudane Xildhibaan Cabdi Ibraahim Warsame (Qowdhan) ayaa hawlo shaqo ku tagay gobolka Haylaan.
Safarka Wasiirka , waxaa ku weheliyey Taliyayaasha Laamaha Ilaalada Canshuuraha gobolada Puntland ee Karkaar,Sanaag iyo Haylaan.
Wasiirka ayaa booqaday baraha Dakhliga ee ay Wasaaradda Maaliyaddu ka hirgalisay degaanada kala ah Baraagaha-Qol iyo Kala dhacda, waxana uu la kulmay Maamulaha cashuuraha Berriga ahna maamulaha Dakhaliga labada gobol Haylaan iyo Sanaag Cali Cabdulaahi Cabdi oo ka warbixiyay habsami u Socodka Shaqada gobolka Iyo baahiyaha shaqo ee ka jira baraha dakhli.
Wasiir kuxigeenka iyo waftigiisa ayaa u gudbay degmada Dhahar ee caasimada gobolka Haylaan, waxana halkaasi ku soo dhoweeyay Guddoomiye degmada Dhahar iyo Xildhiban Mahdi Siciid Xasan, iyaga oo si wadajir ah uu Dhagax-Dhigay Xarunta Wasaaradda Maaliyadda ee degmada Dhahar, waxa uuna Wasiirku sheegay In dhawaan la bilaabi doono dhismaheeda.
Maamulaha cashuuraha Berriga degmada Dhahar Salaad Siciid Jibe ayaa Wasiirka xog-dheeri ah ka siiyey Shaqada Maalinlaha ah ee ka socota degmada Iyo deegaanada hoostaga , isagoo sheegay guulaha dakhli ay gaadhen iyo Baahiyahooda shaqo .
Ugu dambayn Wasiir kuxigeenka Maaliyadda Puntland safarkiisa ku soo af-meeray Kastamka Alxamdulilaah oo ka tirsan Ggobolka obolka Karkaar.
Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Puntland oo gobolka Sanaag ka dhagax dhigay dhismaha cusub ee Maaliyadda Puntland iyo Bangiga Dowladda(Sawirro).
Wasiir Kuxigeenka Maaliyadda Dowladda Puntland oo gaaray magaalada Qardho(Sawirro+Muuqaal)